May 31, 2019 F.G 0
Wargeyska The Star ee ka soo baxay dalka Kenya ayaa shaaciyay in lacag gaareysa $1.7 million lagu qabtay garoonka diyaaradaha Joma Kenyatta habeenimadii Isniinta. Lacagtaan ayaa la sheegay inuu leeyahay sarkaal sare oo ka tirsan Sirdoonka dowlada Soomaaliya oo aad ugu dhow Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo sida uu daabacay wargeyska The Star. Wararka ayaa sheegaya in lacagtan ay markeedii hore ka timid dalka Ethiopia, waxaana watay sarkaalka ka tirsan Sirdoonka Somalia. Ilo kala duwan ayaa sheegaya in lacagta la qabtay uu waday C/llaahi Kulane oo ka mid ah Saraakiisha NISA, kuna dhow Madaxweyne Farmaajo. Sarkaalkan ayaa la sheegay in habeen ka hor laga celiya Garoonka Joma Kenyatta, xilli uu doonayay inuu gudaha u galo magaalada Nairobi. Tallaabada ay Wasaarada Arrimaha Dibbada Kenya uga mamnuucday in dalka Kenya la soo geliyo xamuul aan cidna la socon ayaa la sheegayaa inay ka dhalatay kadib markii la qabtay lacagtan. Ma jirto illaa hada war rasmi ah oo ka soo baxay dowlada Kenya sida ay ka yeeleyso lacagta gaareysa $1.7 million oo dollar ee ay ku qabatay garoonka [Sii aqri]
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galay Shirka degdega ah ee Madaxda Carabta
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka qeyb galay Shirka degdega ah ee Hoggaamiyeyaasha jaamacadda Carabta uu isugu yeeray Boqorka Sacuudiga Salmaan Bin Cabdulcasiis, kaasoo looga hadlayay xaaladaha ka taagan Gobolka iyo dalalka Carabta. Kulankan oo xalay ka dhacay magaalada barakeysan ee Makkah Al-Mukarama ayaa waxaa ka qeyb galay 22-ka dal ee ku mideysan yihiin Ururka Jaamacadda Carabta. Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis oo shirka furay ayaa ka hadlay xaaladaha ka jira Gobolka, caqabadaha, xaalada Yemen iyo dagaalka Argagixisada, waxaana Sacuudiga uu walaac ka muujiyay Kooxda Xuutiyiinta Yemen oo bilaabay weeraro ay ku qaadayaan dhuumaha iyo maraakiibta shidaalka. Sidoo kale Boqorka Sacuudiga ayaa ka hadlay caqabadaha ay dalalka Khaliijka kala kulmayaan Iiraan iyo taageerada ay u fidiso Xuutiyiinta. Madaxweyne Farmaajo ayaa kulamo gaar gaar ah la qaatay madaxda ka qeyb galay shirka oo uu ka mid ahaa Ra’iisul Wasaaraha dalka Qatar. Sidoo kale Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la qaatay Boqorka Sacuudiga iyo Dhaxalsugihiisa, iyagoo ka wada hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan xiriirka labada dal, xaalada Gobolka iyo arrimo [Sii aqri]
Ra’iisul wasaraaaha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), Xasan Cali Khayre oo uu wehliyo wasiirka waxbarashadda ayaa soo xiray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka oo si guul iyo nabad-gelyo ah kusoo dhamaaday. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre yaa booqday Xarunta Gahayr ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed oo kamid ah goobaha imtixaanku maalmahaan ka socoday si uu u ogaado xaalada ardayda gashay imtixaanka uguna dhiiri galiyo in ay sii wadaan heerarka kala duwan ee Waxbarashada. Ra’iisul Wasaaraha XFS ayaa ardayda Soomaaliyeed ee u soo dhabar adaygay waxbarashada u rajeeyey guul, waxa uuna ku booriyey in ay dadaalka iyo dul-qaadka sii wadaan si hogaamiyaasha dalka uga mid noqdaan. Imtixaanka Shahaadiga ah oo sannadkaan ay ka qayb galeen 31,258 arday ayaa waxa uu si isku mid ah uga socday magaalada Muqdisho iyo goballada dalka laga soo billaabo 27/05/2019.
Prof. Dufle Oo Yiri “Sigaarku wuxuu sababaa kansarka ku dhaca Sambabada”
Dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa mar kale bulshada uga digay qatarta uu leeyahay sigaarka iyo cudurada halista ah ee ka dhasha, iyadoo sanad walba maanta oo kale 31-ka May 2019 ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey joojinta cabista Sigaarka Prof/Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka waramay dhibaatada uu sigaarka iyo noocyada kale ee tubaakadu ku hayaan caafimaadka iyo dhaqaalaha bulshada. Waxaa uu sheegay Profesor. Dufle in sanadkan heyadda caafimaadka Adduunka ee WHO ay diirada saartay sigaarka iyo cudurada uu u keeno Sambabada iyo Neef-mareenka “Tobacco and Lung Health” si loo muujiyo qatarta iyo dhibaatada cabista sigaarku u leedahay Sambabada iyo neef-mareenka qofka isticmaala. “Maanta oo ay ku beegan tahay 31-ka May 2019 waa maalinta loo asteeyay joojinta cabista sigaarka ee caalamka, taasoo looga gol leeyahay in bulshada lagu wacyi geliyo khatarta uu leeyahay, tubaakada waxay u kala baxdaa noocyo badan sida: Sigaarka, Siigarka, Bayb-ka, shiishada, Tubaakada la ruugo, mida la calaliyo iyo tan kale ee daanka la gashado, intaasoo dhanba waa khatar caafimaad haba ku kala badnaadeene” [Sii aqri]
Qatar ayaa ka qayb galaysa shirka ka furmaya Sucuudiga
May 30, 2019 F.G 0
Ra’iisul Wasaaraha dalka Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ayaa ka qeyb galaya shir madaxeedka ka dhacaya magaalada barakeysan ee Makka, kaasoo uu iclaamiyay Boqorka Sacuudiga. Waa wafdigii ugu heerka sareeyay ee ka socda Qatar oo ka qeyb geli doona Shirka Ururka Iskaashiga Islaamka iyo shir kale oo gaar u ah Golaha Iskaashiga Khaliijka. Amiirka dalka Qatar Sheekh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa todobaadkan guddoomay warqad casuumaad ah oo uga timid Boqorka Sacuudiga, si uu uga qeyb galo shirka ka dhacaya magaalada Makkah. Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar ayaa xaqiijiyay in shirka oo maanta dhacaya uu ka qeyb geli doono Ra’iisul Wasaaraha Qatar, kaasoo noqonaya Mas’uulkii ugu heerka sareeyay oo Qatar ka socda oo hor-fariisan doona dalalka Baxreyn, Imaaraadka iyo Sacuudiga oo labo sano ka hor xiriirka u jaray. Shirkaan ayaa waxaa ka qayb galaya inta badan wadama Islaamka oo uu isku yeeray Boqorka Suciida waxaana dalalka ka qayb galaya kamida Soomaaliya waxaana haatan Sacuudiga ku sugan Madaxweynaha Jamhuuriya Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo. Dowladaan yar ee qani ah [Sii aqri]
Dowlada Kenya Oo Xayiraado Ku Soo Rogtay Xamuulka Ganacsi ee Laga Qaado Soomaaliya,
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in aanay ogolaan doonin xamuulka laga qaado Soomaaliya in la geliyo dalkeeda, iyadoo aan cidna la socon. Go’aan ka soo baxay Kenya ayaa lagu sheegay in lala wareegi doono, lana burburin doono alaabaha sida xamuulka ah loo geliyo dalkaas oo aan cidna wadan. Kenya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay alaabo badan oo aan lala socon oo la saaro duulimaadyada ka yimaada Soomaaliya, taasoo ay xustay inay ka hor imaaneyso shuruucda caalamiga ah, ayna keeni karto qatar amni. “Dowladda Kenya ma ogolaan doonto alaab aysan la socon qofkii lahaa in la keeno dalka. Alaabtaas waa lala wareegi doonaa waana la burburin doonaa iyadoo la eegayo badbaadada duulimaadyada iyo shuruucda amniga diyaaradda soo qaaddana waa lala xisaabtami doonaa”ayaa lagu yiri go’aan ka soo baxay dowladda Kenya. Sidoo kale dowladda Kenya ayaa sheegay in Sarkaal Soomaali ah oo aan wadan dal ku galka aan loo ogolaan doonin inuu Kenya gudaha u soo galo, sida ay cadeysay Wasaaradda Arrimaha Dibadda. Tallaabadan ayaa qeyb ka ah cadaadis ay muddooyinkii u dambeeyay isa soo tarayay, kaasoo [Sii aqri]
AKHRISO:War-saxaafadeed”Mamulka Galmudug Oo Sheegtay in ay Joojiyay Wada Shaqeyntii KLala Dhexeysay Dowladda dhexe
War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyadda galmudug ayaa lagu hakiyay wada shaqeyntii kala dhexeeysay Dowladda Soomaaliya. Galmudug waxaa ay joojisay xiriirkii wada shaqeyneyd ee dowladda federaalka inta heshiis siyaasadeed laga gaarayo arrimaha; dhameystirka dastuurka, doorashooyinka federaalka iyo amniga qaranka. Sidoo kale Warsaxaafadeed oo aad u dheeraa ayaa galmudug waxaa ay beesha caalamka ka dalbatay inay si dhow ula socdaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo in aysan aqoonsan sharciyada ay waddo xukuumadda soomaaliya iyo in ay xoojiyaan la xisaabtanka dowladda federaalka. Arintan ayaa ku soo aadaysa xilli uu aad u xun yihiin xiriirka u dhexeeya dowladda Dhexe iyo kuwa Maamul gobaleedyada qaar. Halkan ka Akhriso
Dowlada Itoobiya Oo Ka Jawaabtay “Somaliland iyo Puntland waxaan u aqoonsannahay inay hoostagaan Soomaaliya”
May 29, 2019 F.G 0
Dowlada Itoobiya ayaa ka hadashay qoraal lagu arkay bogga intarnet-ka ee wasaaraddeeda arrimaha dibedda, kaas oo Somaliland iyo Puntland lagu daray liiska dalalka ay matalaad diblumaasiyadeed ku leeyihiin. Dowlada Itoobiya waxay sheegtay inay aqoonsan tahay madaxbanaanida Soomaaliya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Nebiyat Getachew, ayaa BBC u sheegay in “Puntland iyo Somaliland ay u aqoosan yihiin in ay hoostagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya”. “Waxaan safaarad ku leenahay Muqdisho. Hase ahaatee Somaliland iyo Puntland waxaan ku leenahay xarumo diblumaasiaydeed”, ayuu sheegay afhayeenka. “Boggeena arrimo badan ayaa ka muuqdo waana eegeynaa”, ayuu hadalkiisa ku daray. Dadbadan weli waxay xasuustaan khariidaddii Itoobiya ee Soomaaliya meesha ka saartay, balse markale Soomaalida isticmaasha baraha bulshada ayaa ka careysan qoraal kale oo kasoo muuqday bogga wasaarradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Barta rasmiga ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa dal ahaan u diiwaan galisay Jamhuuriyadda Iskeed ugu Dhawaaqday Madaxbabbaanida ee Somaliland. Wasaaradda oo taxaysa dalalka ay xarumaha dublamaasiyadeed ku leedahay ayaa dal ahaan u diiwaan galisay, Somaliland iyo waliba Puntland. Sidoo kale Jamhuuriyadda Iskeed ugu Dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland [Sii aqri]
Madaxweyne Farmaajo Oo u Ambabaxay Sacuudiga Iyo Safiir Cusub Oo Loo Magacaabay Dalka Sacuudiga
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa u ambabaxay dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, isagoo magaalada barakaysan ee Makkah uga qeyb gali doona Shir Madaxeedka Ururka Iskaashiga Islaamka (IOC). Meertada 14-aad ee Shir Madaxeedka Ururka Iskaashiga Islaamka oo lagu marti qaaday hoggaamiyeyaasha 57-dal ee ku bahoobay ururkan ayaa waxaa lagaga arrinsanayaa la dagaallanka argagixisada iyo fikirka gurracan ee xagjirnimada, qadiyadda Falastiin iyo dhibaatooyinka cunsuriyadeed ee ka dhanka ah Muslimiinta. Madaxweyne Farmaajo ayaa isla Magaaladda barakeysan ee Makka kaga qeyb gali doono maalinta barri ah Shir Madaxeed aan caadi ahayn oo ay isugu imaanayaan Madaxda Dalalka Jaamacadda Carabta, kaasoo lagaga wada hadlayo xaaladaha ugu danbeeyey ee Dalalkaas, arrinta Yemen iyo Kooxda Xuutiyiinta oo muddooyinkii u dambeeyay weeraro ku qaaday danaha Sacuudiga iyo Imaaraadka. Wafdiga Madaxweynaha ee u amba-baxay magaalada barakaysan ee Makka waxaa hordhac usii ahaa diblumaasiyiin Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad oo la qaabeeyey ajandeyaasha shirarkan Wasiirrada dhiggiisa ah ee dalalka ku mideysan Jaamacadda Carabta iyo kuwa Ururka Iskaashiga Islaamka. Dhinaca kale Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo [Sii aqri]
Danjirayaashii Soomaaliya ee Masar iyo Sudan Oo Loo Qabtay Waqti Gaban inay dalka ku soo galaan
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa muddo todobaad gudahood ugu yeertay inay dalka ku soo galaan Safiirada Soomaaliya u fadhiya dalalka Masar iyo Sudan C/qani Maxamed Waceys iyo C/risaaq Shoole. Tallaabada loogu yeeray Safiiradan ayaa si rasmi ah loo ogeyn, hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya in la bedeli doono. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Sudan C/risaaq Shoole ayaa sanadkii hore loo magacaabay xilka Safaaradda, isagoo ka mid ahaa Agaasime kuxigeenada Madaxtooyada Villa Somalia. C/qani Maxamed Waceys oo ah Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar iyo Xoghayaha Joogtada ee Jaamacadda Carabta ayaa muddo afar sano hayay xilkaas, tan iyo markii uu geeriyooday safiirkii hore. Ilo ku dhow dhow Madaxtooyada ayaa sheegaya in Labada safiir uu saameyn doono is bedelo lagu sameynayo safaaradaha, sidoo kale waxaa saameyn doona habka awood qeybsiga ee 4.5 oo xubno ku heyb ahaa Safaarado kale loo magacaabay Safiirka cusub ee loo magacaabay dalka Boqortootada Sacuudi Carabiya C/xakiin Xasan Ashkir ayaa ku heyb ah Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Masar iyo Jaamacadda Carabta, waana sababta loo maleynayo in Mr Waceys loogu yeeray [Sii aqri]